Sei Semalt Analytics Inogona Kuwedzera Yako SEO Rankings
Kana iwe uine bhizimusi repamhepo, iwe unofanirwa kuve unotoziva nezve injini yekutsvagisa, SEO. Iko kusanganisa kwehunyanzvi uye husiri hwekuita maitiro ayo mawebhusaiti anogona kuitwa kukwirira kumusoro mumatanho ekutsvaga. Mawebhusaiti anogadzirwa neSEO anowana vashanyi vakawanda uye nekudaro vanowana mamwe maitiro. Google uye Bing ndiyo inonyanya kuzivikanwa injini kunze uko. Kana iwe wakamboshandisa imwechete, iwe unozoziva kuti vanhu vazhinji havawanzo kushanyira iyo yechipiri peji kuti vawane zvavari kutsvaga. Naizvozvo, kukwikwidza kweiyo peji rekutanga kupesana nerimwe rekutsvaga keyword kunotyisa, kutaura zvishoma.
Kubvira paWebhu 2.0, iyo nyika ye tech yakaona shanduko huru. Kwete chete kuti hunyanzvi hutsva hwachinja nzanga, hwakabvumirawo vemabhizinesi pamwe nemasangano kuti vaite zvisarudzo zvine ruzivo kana zvasvika kune mamwe matanho akakosha ekuita sarudzo. Quanifying ndiyo chikonzero nei ivo vakagoneswa kuti vaite kudaro. Software yekuongorora yakabata munenge munda wese nekushambadzira, kungave kwedigital kana neimwe nzira, kwakaita kwazvo kubva iko.
Semalt Analytics inyanzvi analytic software iyo inobvumira varidzi vezvinabhizinesi vepamhepo kunyatso tsvaga avo nevavanokwikwidza navo zvinzvimbo zvine chekuita ne SEO uye yakazara kushambadzira kushambadzira. Ruzivo rwayo rwakakwana uye rwakarongeka rwebhizinesi rinotendera vanamuzvinabhizinesi uye varidzi vewebsite kuti vanzwisise zviri nani: masimba eindasitiri yavo, achivabvumidza kuita sarudzo dzakachena uye kuva pamberi pemutambo wavo.
Kana iwe uri kutarisa mune yakanaka analytic software yekubatsira kukwidziridza yako webhusaiti SEO masosi, ipapo Semal Analytics ndiyo yakakodzera. Heano maitiro eSemalt Analytics angakubatsira iwe kuwedzera yako SEO maserura.
Wongorora Kuenderera Mberi
Nhanho yekutanga yekuzadzisa chero chinangwa kuve nemufananidzo wakajeka wekuti nzira inotungamira kune iyo chinangwa inotaridzika sei. Izvi zvinoreva, kutsanangura zvakajeka uye zvakajeka zvinangwa zvinopesana neyakafa uye kushanda nesimba mukwidza wekuti ubudirire. Kune mawebhusaiti, izvi zvinoreva kuongorora mamiriro ako pazvino pawebhu uye kutsvaga mamwe ma metric akakosha ane chekuita nezvese-peji uye pane peji peji SEO.
Semalt Analytics inokushongedza iwe nekukwanisa kuve nekuongororwa kwakakwana kwenzvimbo yako webhusaiti kubva pabhizinesi yakamira-pini. Iyo analytic software inokubatsira iwe kunzwisisa kunaka kwese kwako kumashure uye mukati. Iyo inobatsira iwe kuenzanisa peji rako rekuremara nguva nevako vakwikwidzi 'uye inokubatsira kuti unzwisise zviri nani webhusaiti yako webhu saiti.
Kunzwisisa aya masitendi kunoita kuti iwe uone kwaunofanirwa kutarisa nezvako uye kunokubatsira kudzosera pfungwa dzako nesimba pairi. Kana Semalt Analytics ikataura kuti iwe hauna dhigirii yepamusoro mune yekutanga indexing, ipapo ndipo paunofanira kutarisa. Kana iyo iine backlinks kune yakakwirira DA mawebhusaiti, ipapo Semalt Analytics inokuudza izvo chaizvo.
Semalt Analytics inopa mashandiro e webhusaiti yako uye inobatsira iwe kuti unzwisise kukosha kwenzvimbo yako neyako mukwikwidzi webhusaiti. Iyo inokubatsira kuona mapatani iwe ausingawanzo kucherechedza zvichikonzera kuti uve neruzivo rwakawanda nezvebhizinesi rako, uye inokupa iyo data yekutarisa nzvimbo yekuvandudza mukati uye kugadzira hutsva pane kuenda.
Nematunhu analytics, iwe unogona kuumba yako yekushambadzira zano mune chimwe chinhu chinokupa yakanyanya mikana yekubudirira munharaunda yakapihwa yenzvimbo. Iyo inoderedza njodzi yako uye inokupa yakajeka nzira yekucheka kune izvo zvaunofanirwa kuwana uye zvinokubatsira iwe kunzwisisa kuti ungazviita sei. Izvo zvinobatsirawo iwe kugovera zviwanikwa zvako nekuchenjera, zvichitendera iwe kuti uchengetedze zviwanikwa zvezvinhu zvakakosha.
Chengetedza Vatambi Vako
Semalt Analytics inokupa iwe kukunda mukana kune vanopikisa vako kukwikwidza nekupa kwavo chinzvimbo mumusika kushamwaridzana neyako. Iwe unoziva izvo vakwikwidzi vako vari kuita uye kuti vari kuzviita sei. Iyo analytics inogona kushandiswa kunyatso kuronga zano rako rekuvarova mune dzimwe nzvimbo dzinogona kubvumira webhusaiti yako kusimuka pamusoro.
Kana iwe uri hushoma, kunzwisisa mashandiro ako vakwikwidzi vanokubvumirawo kuti usimuke nekukurumidza. Kana iwe ukafunga kuita kwako kutsvagurudza, zvinogona kutora iwe nguva yakawanda. Asi neSemalt Analytics, iwe unogona nyore kunzwisisa ako akwikwidzi 'SEO mazano mune yako chinangwa yekutsvaga nzvimbo nekungodzvanya mashoma.
Iyo analytics software inokupa zvakare kugona kwekunatsa kufambira mberi kwako kupfuura nguva. Uchishandisa zano iri, unogona kugamuchira nemufaro mhinduro dzako dzeSEO nzira dzatove munzvimbo, uye kuvaka mhinduro mhinduro iyo inovandudza yako rankings neyese iteration.
Dhata Kune Yako Kuraswa
NaSemalt Analytics, unogona kushandura zviri nyore data analytic ikaita chimiro chechisarudzo chako. Nechekureruka bhatani rebhatani, data rako rinogona kutumirwa kune ese maForcel uye mafomu ePDF achibvumira iwe kuendesa ruzivo rwako nenzira inoverengwa nevanhu uye kugadzira mharidzo dzemapoka ako uye vatengi.
NeSemalt Analytics, iwe unogona kuve neakawanda emagetsi analytical pane yako iwe. Iyo ine akati wandei maficha ayo anoita iyo sarudzo yakanaka kune yako analytic zvaunoda.
Pamwe iyo inonyanya kukosha chikamu cheSEO is keyword research. Kutsvaga iwo akakosha mazwi ekutarisira uye kugadzirisa webhusaiti yako zvinopesana zvinogoneka chete kana iwe uchinzwisisa nzvimbo yekutsvaga zviri nani. Keyword research inzira yekugadzira iyo inoda nguva uye kushanda nesimba.
Semalt Analytics inokupa Keyword mazano ekuenda uye inokubvumira kuti unzwisise nzvimbo yekutsvaga zviri nani. Nezvibodzwa zvayo zvine mutsindo wezwi rekutengesa, maitiro ako anogona kuenda zvakanyanya zvakanyanya.
Kutsvaga kuti ndeapi mazwi akakosha ekutsvaga webhusaiti yako webhusaiti SEO yakagadziriswa chikamu chete chemutambo. Yekutsvagisa Injini Yekutsvaga inzira inodzorwa nemuyedzo nekutadza. Izvo chete mushure meye mhinduro iwe yaunogamuchira neyako SEO kuedza iwe unogona kuziva kugona kwavo. Ne Semalt Analytics, iwe unogona kuongorora kuti sei yako keyword research iri kuita yewebhu saiti yako. Iyo inopa nhamba yevashanyi iyo yakanangidzirwa kune peji rako kuburikidza nemamwe makiyi. Izvo zvinobatsirawo iwe kugadzira zvigadzirwa zvehunyanzvi kuti uwane iyo yakakwira kunze kwekutsvaga maitiro.
Kunzwisisa kukosha kwechiratidzo chako kunobatsira kuti iwe uverengerwe mafambiro nezve webhusaiti yako. Iyo inokutendera iwe kuti ufunge kuti webhusaiti yako inoonekwa sei nevateereri, ichikupa kugona kwekuendesa zvigadzirwa kana masevhisi kune yakanyanya kunaka chiyero. Ne Semalt Analytics, zita rako rekuzivikanwa rinoyerwa nehuwandu hwaro hwekuzivikanwa kukupa iwe mukana wekushanda pane yako kambani kuronga uye kuwedzera kuzivikanwa sezvingave zvichidikanwa.
Sezvo iwe paunenge uchiita yako SEO zano, iwe uchazoda nhamba metrics kutonga yako webhusaiti pari zvino kwakatenderedza mamwe mazwi. Semalt Analytics inokupa yako webhusaiti kiyi yekumisikidzwa nenguva, ichikubvumira kuti uone mapatani iwe aungave usingaone neimwe nzira. Chinomiririra chinomiririra chekuita kwako chingaite zvakanaka zvakawanda kana zvasvika pakuumba nzira itsva dzekuumba.
Yakatsvaga nzvimbo inowanzogara ichikwikwidzwa nemakwikwi. Zvakaoma kuuya neshoko rekutsvaga risiri kurwiwa zvine hukasha. Semalt Analytics inokwikwidza vakwikwidzi vako uye inokupa nzwisiso yakajeka mune izvo zvigaro zvavo zviri munzvimbo yekutsvaga; ipo pavanesimba; ndipo pane nzvimbo yekutora. Nematanho aya anoongorora, iwe unogona kukwikwidza nevaikwikwidza uine chivimbo.
Mafuta anotsvaga seGoogle ane yakavanzika mafomula avanoshandisa kukwira mawebhusaiti kupesana nekutsvaga mazwi Kunyangwe iyo algorithm iri chakavanzika, kune mamwe makomendi akapiwa ayo mawebhusaiti anofanira kusangana kuitira kuti akwanise kuiswa munzvimbo dziri nani. Aya masetwork anosanganisira kuverenga, kuwirirana kwemamiriro ekutsvaga mazwi, kukurumidza kwesaiti uye zvimwe zvakawanda zvehunyanzvi. Semalt Analytics inoongorora webhusaiti yako kuti uve nechokwadi chekuti inosangana neZU maitiro zvizere, uye haina kushomeka munzvimbo chero yakakosha.
Sei Semalt Analytics Inobatsira Sei You
Ingo nyoresa kupinda yako Semalt Analytics account uye kuvhura maitiro ekuunganidza-data. Iyo software ichakupa yakanyatsorondedzerwa mushumo webhusaiti yako SEO uye yevanokwikwidza vako '. Semalt Analytics panguva imwe chete inopa kusika ekutsvaga mazwi makuru uye mazwi aunogona kushandisa kuti uwedzere yako SEO mamiriro. Izvo zvinoita saizvozvo nekuunganidza data zuva rega rega, zvakatenderedza webhusaiti yako yekutsvaga nzvimbo uye kuongorora maitiro evashandisi uye maitiro akajairika ekutsvaga.
Iyo analytics inovandudzwa zuva nezuva kuti iwe usazombopererwa nezvezvinoitika mudunhu rako rekutsvaga. Nemafirita akasiyana-siyana aripo, unogona kuvhara mamwe mazwi kuita kuti kutsvakisisa kwako kuve nesimba. Zvimiro senge keyword grouping zvinokwanisawo kukwidzirisa rako basa.
Semalt Analytics inokupa zvakare kugona kutora data uye analytics uye kuvaratidza ivo kuburikidza neSemalt's API endpoints. Ingogadzirisa mapeto uye uratidze yako analytic data pane yako yakasarudzwa sosi.
Kuisa webhusaiti zviri nani pane injini dzekutsvaga, SEO inoda kuitirwa. Iyo yekugadzira uye yehunyanzvi maitiro ayo anoda nguva uye kushanda nesimba. Ne Semalt Analytics, yako webhusaiti SEO inogona kuitwa nenzira inoshanda, ichikupa nguva uye kuchinjika kwekutarisa nezano uye hunyanzvi. Semalt Analytics inobatsira iwe kuzadzisa yako SEO zvinangwa nekungodzvanya mashoma.